Ifulethi kwisithili sembali
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAurélie Et Laurent
Indawo yokuhlala isembindini wedolophu yakudala yaseChaumont amanyathelo nje ambalwa ukusuka kwi-12th century.
Umbindi wesixeko nazo zonke izibonelelo zaso zingaphantsi kwemizuzu emi-5 ngeenyawo.
I-pied-a-terre efanelekileyo yokufumanisa iChaumont kunye neHaute-Marne
Igumbi elizimeleyo le-90 m² elidityaniswe nendlu yethu enethayile yangaphandle (kwintendelezo eqhelekileyo) yokutyela okanye ukonwabela imozulu entle.
Indawo yokuhlala isandula ukulungiswa phantse ngokupheleleyo.
Kumgangatho ophantsi, uya kufumana iholo yokungena, igumbi lokuhlala elinekhitshi elinesicwangciso esivulekileyo kunye nendawo yokutyela, igumbi lokuhlambela elineshawa kunye neWC. Phezulu kukho amagumbi amabini okulala (elinye likhulu kwaye elinye lincinci) kodwa kuya kufuneka uwele igumbi loku-1 ukuze ufikelele kwigumbi lokulala lesibini.
IChaumont yakhiwa ngenkulungwane ye-10 kwindawo ethe tyaba elawula iintlambo zeSuize kunye neMarne. Imvelaphi ye-feudal, indawo yokuhlala yangaphambili ye-Counts ye-Champagne eyabengezela kuwo wonke lo mmandla, isixeko kwangethuba saxhamla kwindawo yobuchule kumda weBurgundy kunye neLorraine.
Indawo yokutyikitywa kwesandulela sesivumelwano esidumileyo soMdibaniso oNgcwele wabalawuli baseYurophu ngokuchasene noNapoleon I, iChaumont yaphinda yanyulwa nguGeneral Pershing ngo-1917 ukuseka ikomkhulu lemikhosi yaseMelika eYurophu.
Owayesakuba ikomkhulu wokwenza isikhuseli, Chaumont ivela namhlanje emzini iiphowusta, kunye International uMthendeleko Poster kunye Graphic Design, ithuba lokuba ufumane imvelaphi endala lokuqokelela Dutailly (iipowusta Toulouse Lautrec, Choubrac ...) Yaye ukuveliswa sinye uninzi lwabayili bemizobo behlabathi.
Umbuki zindwendwe ngu- Aurélie Et Laurent
UAurélie Et Laurent yi-Superhost
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$1697
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Chaumont